Bishii Meey 9, 2018, Mr. Tang yurong, Svenska kullager-fabriken group madaxweyne ku xigeen sare iyo Madaxweynaha SKF Asia, iyo Mr. Wang wei, Madaxweynaha waaxda iibka warshadaha ee SKF China waxay booqdeen Shanghai kaiquan iyagoo matalaya kooxda SKF.
Mudane Wang jian, kuxigeenka kooxda kaiquan group, wuxuu si diirran u qaabilay martida wuxuuna usheegay hanaanka horumarineed ee kooxda kaiquan group. Mudane Wang wuxuu weheliyey martida si ay u soo booqdaan guriga bambooyin kaiquan iyo madal daruur caqli gal ah wuxuuna sameeyey hordhac faah faahsan Labada dhinac waxay muujiyeen ujeedkooda inay sii xoojiyaan iskaashiga.
Mudane Lin kaiwen, gudoomiyaha kooxda kaiquan group, wuxuu go aansaday inuu si qoto dheer uga wada shaqeeyo arimahan soosocda iyadoo lagu saleynayo adeegsiga la oggol yahay ee sumadaha ganacsiga kadib markuu kala hadlay wakiilada kooxda SKF:
1. Sii qoto dheer iskaashiga istiraatiijiyadeed iyo in si buuxda loo ballaariyo iskaashiga alaabooyin kala duwan, dhufto iyo warshado;
2. In la xoojiyo isgaarsiinta farsamada, oo ay ku jiraan horumarinta wax soo saarka cusub, kor u qaadista wax soo saarka iyo qaabeynta qaabeynta;
3. In wada shaqeyn qoto dheer lala yeesho kormeerka waxqabadka qalabka wareegaya. Adoo adeegsanaya aqoonta keydka ah ee labada dhinac ee dhinacyada kala duwan, soosaar qorshaha ugu adag ee lagu tijaabinayo waxqabadka qalabka wareega ee lagu dabaqi karo warshadaha bamka Shiinaha; Isticmaal xog weyn iyo ka shaqeynta daruuraha macnaheedu waa inay ka caawiso macaamiisha inay gaaraan aragga iyo saadaalinta waxqabadka qalabka wareega.
SKF waa soo saaraha ugu sareeya aduunka ee soo saarista gawaarida, iyada oo laga howlgalo 130 wadan halka in kabadan 500 oo milyan la soo saaro sanad walba. Shanghai kaiquan, oo ah shirkadda horseedka ka ah warshadaha bamka gudaha, waxay dadaal wadajir ah la geli doontaa SKF si loo gaaro guulo ballaaran oo ku saabsan cilmi-baarista iyo horumarinta wax soo saarka, tayeynta iyo casriyeynta. Aan sugno oo aan aragno!